आइतबार ८-१४-२०७७/Sunday 11-29-2020/	09:47 am
“ख्वामित् !” भक्त जोड्संग चिच्यायो । उसले दुबै हातहरुलाई आफ्नो नाकको समानान्तर हुने गरी लमतन्न पार्‍याे । ऊ दायाँबायाँ नहेरी सोझिएको हातको दिशामा दौडदै ख्वामितको खुट्टा अघिल्तिर पुग्यो अनि चार पाऊ टेकेर यत्ति लामो जिब्रो निकाल्यो । ख्वामित्ले अलि असहज महशुस गर्‍याे ।
बैठकमा बसेका अरुहरु विस्फारित नेत्रले घट्ना गोचर गर्न थाले । भक्तले ख्वामितको पाऊ दुवै हत्केलाले सुम्सुम्यायो अनि उठेर छेऊको कुर्सीमा बस्यो । त्यहाँ आएका सबैजना एकआपसमा खस्याक्खुसुक् गर्न थाले ।
“हुन्छ, मैले तपाईँहरु सबैको कुरा सुनें । म विचार गर्छु यस विषयमा ।” ख्वामित् अर्थात मुख्यमन्त्री ज्ञानबहादुर कटुवालले कुरा राखेर बैठक सक्ने निधो गर्‍याे । सबैले मुण्टो तलमाथि गरेर हल्लाए अनि नमस्कार टक्र्याउँदै विदा भए ।
“के गरेको यस्तो ? यति धेरै मान्छेहरुको अघिल्तिर.....लाज लाग्दैन ?” ज्ञानबहादुरले हकार्‍याे ।
“मैले हजुर मात्र एक्लै होइसिन्छ भनेर..... अरु छन् भन्ने त मेसै भएनछ ।” भक्तलाई राम्रैसँग थाहा थियो कि ज्ञानबहादुर मनमनै त प्रसन्न थियो भन्ने कुरा ।
“ख्वामित् ! जयजयकार छ सबैतिर । मान्छेहरु त खुसी छन् । हजुर मुख्यमन्त्री भएको डेढ बर्ष त भयो ।” भक्तले हात जोडेरै बोल्यो ।
“तिमी त्यसो भन्छौ । यी स्थानीय पत्रिकाहरुले त धुवाँधुलोले हिँडन नसक्ने अवस्था छ भनेर लेखेका छन् त !” ज्ञानबहादुरले प्रश्न गर्‍याे ।
“धत्, फटाहाहरु ! जे पायो त्यहि लेख्दा रहेछन् । बाटोका धुवाँधुलो त छु मन्तर भइसक्यो ।” भक्तले कुरा विसायो ।
“यस्ता मेडियाको कुरा सुनेर साध्य छैन । पुर्वाग्रही छन् पुर्वाग्रही । हजुरप्रति ।” भक्तले ज्ञानबहादुरका चक्षुमार्गमा पर्दा लगायो । त्यसपछि आफ्नो दाहिने हत्केलाले आफ्नो टाउकोको पछाडिको कपाल कन्याउँदै फेरि बोल्यो “ख्वामित्, यी पूर्वाग्रही मेडियाहरुलाई प्रदेश मातहतबाटै नियन्त्रण गर्ने थप कानून ल्याउन ढिलाई पो भएको हो कि !”
ज्ञानबहादुरको गाडि चलाउँने चालक पनि भक्तले नै व्यवस्था गरेको आफन्त थियो । मन्त्रालय जाँदा आउँदा कालोपत्रे भएका बाटोहरुबाटै लैजान्थ्यो उसले पनि । कहिले एकतिरबाट लान्थ्यो भने कहिले अर्कोतिरबाट तर कालोपत्र भएकै बाटोबाट लैजान्थ्यो गाडि । ज्ञानबहादुर मनमनै आफैंप्रति गर्ववान्वित हुन्थ्यो ।
आज पनि उसले गाडिको शिशाबाट दायाँबायाँ हेर्‍याे । सफा देख्यो बाटो । बाटोमा, तर पनि अधिकाँस मानिसहरुले नाकमुख मास्कले छोपेर हिँडिरहेका देख्यो उसले । त्योबेला कोरोनाको सन्त्रास थिएन विश्वमा ।
त्यहि दिन दिउँसोको कुरा हो । मन्त्रालयको नजिकै रहेको एउटा विद्यालयको प्राङ्गणमा पर्यावरण सम्बन्धि कार्यक्रममा ज्ञानबहादुर प्रमुख अतिथी भएर सहभागी भयो । उसको मनमा विहान मन्त्रालय
आउँदाको धङ्गधङ्गी घुमिरहेको रहेछ । मन्तव्य दिने क्रममा “म मुख्यमन्त्री भएको यो डेढ बर्षमा धुवाँधुलो नियन्त्रण हुँदै आएको छ । मन्त्रालयबाट यहाँसम्म म हिँडेरै आएँ । मैले मास्क लगाउँनु परेन ।
“मलाई पार्टीबाटै सहयोग भएन ।” व्हिस्कीले भिजेको दुबै ओठलाई ज्ञानबहादुरले जिब्रोले चलायो एकपटक । “हजुरको लोकप्रियताले जलेका हुन तिनीहरु । फेरि पनि हजुरले नै मुख्यमन्त्रीको टिकट पाउँनुहुन्छ भनेर ईख गरेका हुन् ।” नीलो भेष्ट लगाएको एउटा ठिटोले फुर्तिका साथ भन्यो ।
मास्क लगाएर तपाईँहरुले पनि सरकारले काम गरेन भन्ने सन्देश नदिनुहोस् । ” उसले मुख चोसो पारीपारी खुब कुरा छाँट्यो त्यहाँ । भेला भएका मानिसहरुले मुखामुख गरे । मुख्यमन्त्रीले बोलेको बेला हल्ला गर्नु अनुशासन हुन्नथ्यो ।
मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरा डढेलो झैं फैलियो चारैतिर । पत्रिकाहरुले ठट्यौली गरे । मानिसहरुले फेसवुकका पर्खालमा अनेक खालका कार्टुनहरु आदानप्रदान गरे । ज्ञानबहादुरका पार्टीका अरु नेताहरुलाई खुब चिन्ता लाग्यो यसखाले प्रचारबाजीका कारण ।
“मुखमा जे आयो त्यहि बोल्ने ?” एकजना नेताले त कुर्सीको डाँडीमा मुड्की बजार्‍याे ।
“मन्चमा माइक समाउँने वित्तिकै प्रतिपक्षीलाई गालि गर्ने तपाईँको शैली ठिक भएन । हारेकालाई सरापेर के हुन्छ ? जनताले रुचाउँने काम गर्नु न !” अर्को नेताले पनि आक्रोशित भावमा सुझाव दियो ।
बेलुका भक्त सहित अरु तीनजना सल्लाहकारलाई राखेर उसले सानो जमघट गर्‍याे ।
ज्ञानबहादुरले दाहिने हातको कान्छी औंलामा पालेको लामो नङ्गले दाहिने कान कोट्यायो । नङ्गमा अलिकति सुख्खा कानेगुजी टाँसिएको रहेछ । उसले ‘फू’ गरेर उडायो अनि बोल्यो,“उहिले एउटा नेताले हाम्रै सरकारलाई फू गरेर ढाल्छु भन्थे । त्यस्तै सोचेका होलान । त्यति कमजोर त म पनि छैन ।”
वरीपरी भेला भएकाहरु ट्वाल्ल परेर ज्ञानबहादुरलाई हेरिरहे । भक्तको मुख चिलायो । केहि बोलुँला झैं गरी ओठ हल्लायो उसले ।
ज्ञानबहादुरले आँखाको ईसाराले हुन्छ भन्यो । एकछिन धेरै विषयमा कुराकानी गरे उनीहरुले । कार्यकर्ता ठिटाहरुलाई व्हिस्की चढिसकेको थियो । अण्टसण्ट बोल्न थालेका थिए । जे होस् त्यो गफगाफले एउटा निस्कर्ष निकाल्यो – सामाजिक सन्जालमा ज्ञानबहादुरको प्रसंशामा धेरैभन्दा धेरै कुराहरु राख्ने । भक्तले त अझ अगाडि बढेर अरु नेतृत्वकर्तालाई सामाजिक सन्जालमा सक्दो खुइल्याउँन आफन्त नातेदारहरुलाई प्रयोग गर्न अह्रायो । त्यहाँ भेला भएका प्रत्येकले फेसबुकमा थप पाँच - पाँचवटा खाता खोल्ने र ज्ञानबहादुरको प्रसंशा र अरुको खोइरो खन्ने निधो गरे ।
“यो पनि आन्दोलनको एउटा पाटो हो ।” भक्तले उत्साहित हुँदै भन्यो अनि ज्ञानबहादुरतिर पुलुक्क हेर्‍याे ।
एकछिन बसेपछि सबैजना विदा भए । भक्त चैं बस्यो त्यहिँ । महत्वपूर्ण योजना सुनाउँनु थियो उसलाई । ज्ञानबहादुरले आँखि भौं हल्लाएर कुरा शुरु गर्न भन्यो । भक्तले यताउति हेर्‍याे अनि उठेर छेऊको झ्यालको खापा लगायो । ऊ ज्ञानबहादुरको कानको छेऊमै आयो अनि साउती गर्नथाल्यो,“त्यो हस्तबहादुर छ नि, हजुरसँग चुनाव हार्ने मान्छे । उसको भाइसहित एकहजारभन्दा बढी मान्छे हाम्रोमा आउँने रे !”
“दुईसय प्रतिशत हो । हस्तबहादुरको भाइ आफैंले मसँग कुरा गरेको आज विहान ।” भक्तले थप दम लगायो ।
“लौ व्यवस्था गर । यति भयो भने त यी पार्टीका कुखुरे साथीहरु कराउँदै गर्छन्, म चिल बनेर फुर्र !” ज्ञानबहादुरको अनुहारमा झन चमक आयो ।
त्यो दिनदेखि भक्तले योजना कार्यान्वयनमा तिब्रता ल्यायो । गोप्य भेटघाट, छलफल चल्यो । हस्तबहादुरको हेपाहा शैलीको विरोध गर्दै उसकै भाइले एकहजार त सक्रिय मान्छे लिएर आउँने बचन दियो ।
पार्टी प्रवेश पछि आगामी चुनावमा कम्तिमा मेयर सम्मको टिकट दिनुपर्ने शर्त थियो उसको । भक्तले पनि ज्ञानबहादुरलाई भनेर केन्द्रसम्म कुरा गर्ने र केन्द्रकै अध्यक्ष बोलाएर पार्टी प्रवेश गराउँने बाचा गर्‍याे । सबै निश्चित जस्तो भयो भन्ने भएपछि ज्ञानबहादुरले एउटा उद्घाटन समारोहमा फुर्ति लगाउँदै बोल्यो, “अबको एक महिनाभित्र मेरो लोकप्रियताको प्रमाण सबैले देख्नेगरी राजनैतिक रंगमंचमा देखापर्नेछ ।”
उसको यो भनाईले तरंग ल्यायो । सबैले सोधीखोजी गरे ज्ञानबहादुरसँग । ज्ञानबहादुरले पनि कुरालाई थप रहस्यमयी बनाएर आफ्नो महत्ता देखाउँन खोज्यो ।
“कस्तो लोकप्रियताको कुरा गरेको तपाईँले ?” पार्टीका एक समकक्षीले प्रश्न गरे ।
“यो भाइरल काण्डले मुख्यमन्त्री पद र हाम्रो पार्टीको समेत हुर्मत लिएको छ ।” पार्टीका समकक्षीले फेसबुकको पर्खालमा लेखिहाले । प्रतिवादमा भक्तले बनाएको ज्ञानबहादुरको विश्वासपात्र भनिएको मानिसको फेसबुक वालबाट भनाई फर्काइहाल्यो, “भिडियो एडिट गरेर बदनाम गर्न बनाइएको हो ।”
“पार्टी र सरकार श्रमजीवीको हैन, तस्करको हुन लागि सक्यो, ख्याल छ तपाईँलाई ? अझ लोकप्रियताको कुरा देख्न लाज लाग्दैन ?”
प्रश्नहरुले घेर्‍याे ज्ञानबहादुरलाई ।
तनाव र रस्साकस्सीकाबीच ज्ञानबहादुरले भक्तलाई समकक्षीहरुको दह्रो प्रतिवाद गर्न आदेश दियो । भक्तले ज्ञानबहादुरकै अर्का विश्वासपात्रको सहमति लिएर त्यो विश्वासपात्रकै नाममा फेसबुक खाता खोलेको थियो । पार्टीका समकक्षी र प्रतिपक्षीहरुलाई दनक दिनुपरे त्यहि खाता प्रयोग हुन्थ्यो । पार्टीका धेरै मानिसहरु त्यो फेसबुकको खातामा साथी बनेका थिए । ज्ञानबहादुरको विश्वासपात्र भएकोले एकातिर त्यो ज्ञानबहादुरकै भावना अभिव्यक्त हुने खाता पनि थियो भने अर्कोतिर ज्ञानबहादुरको आफ्नो खाता नभएकोले ऊ सम्भावित विवादबाट पनि जोगिन सक्थ्यो । भक्तले त्यहि अर्को विश्वासपात्रको खाताबाट फुत्त भनाई टक्र्‍यायो “कुखुराको छाति भएकाहरुले चिलले उड्ने उचाईको बारेमा कन्कन् किन गर्ने ?”
ज्ञानबहादुरले ल्याउँने यस्ता उटपट्याङ्ग कहानीहरुको फेहरिस्त बताएर त साध्य नै छैन । छ महिना अगाडि पनि यस्तै भएको थियो । प्रदेश सरकारबाट नियुक्ति गर्न पाउँने एउटा महत्वपूर्ण पदमा ज्ञानबहादुरले एकजना व्यापारी पृष्ठभूमीको मानिसलाई नियुक्त गरेको थियो । नियुक्ति पाउँने व्यक्ति राम्रो छवीको हैन भन्दै पार्टीका समकक्षीहरुले औंलो उठाएका थिए । त्यसैक्रममा एकदिन ज्ञानबहादुरले भक्तसँग सल्लाह गर्‍याे । भक्तले दिएको सल्लाह अनुसार एउटा पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम राखिएको थियो । त्यो नियुक्ति पाउँने मानिस समेत अतिथी भएको कार्यक्रममा ज्ञानबहादुरले हौसिँदै बोलिहाल्यो, “अरुले नियुक्त गरेको पदाधिकारीको चरित्रको अंक शुन्यभन्दा अलिकति माथि मैले नियुक्त गरेको पदाधिकारीको चरित्र एकसय अंकभन्दा धेरै माथि” ।
परर्र ताली बजाएका थिए ज्ञानबहादुरका प्रशंसकहरुले । ज्ञानबहादुरको यो बोलिको फेसबुक, पत्रिकाहरुमा खुब टीकाटिप्पणी चलेको थियो । टिकाटिप्पणी चलिरहेको पाँचदिन जति भएको थियो, त्यो नियुक्ति पाउँने मानिस आफ्नै कार्यालयको महिला सहकर्मीलाई पछाडिबाट समातेर अठ्याउँदै गरेको सिसिटिवी क्यामराको चलचित्रबाट भाइरल पो भयो ।
नियुक्ति पाउँने व्यक्तिले नैतिकता देखाएर राजिनामा दियो तर पनि ज्ञानबहादुरले आफूले गरेको त्यो नियुक्ति गलत भएछ भन्दै भनेन ।
अहिले पनि प्रतिपक्षी पार्टीको नेतृत्वकर्ताको भाइसहित हजारौंलाई पार्टीमा ल्याउँन बुनिएको तानाबानाले आफूलाई समकक्षीभन्दा कयौं गुणा अग्लो व्यक्तित्व बनाउँनेछ भनेर ऊ मख्ख थियो । भक्त र ऊ जस्तै अरुहरुले पनि उसको उम्लिएको दिमागमा तलबाट झन्झन् अगुल्टो ठोस्दै थिए ।
ज्ञानबहादुर पनि चानचुने मान्छे त हैन नि ! केन्द्रको अध्यक्षको दाहिने हात हो ऊ । केन्द्रको अध्यक्षले अरु नेतृत्वकर्ताहरुसँग छलफल नै नगरी डेढ बर्ष अगाडि उसलाई मुख्यमन्त्री बनाउँन हस्तक्षेप गरेको थियो । अबको यो ठूलो योजना पनि पार्टीका अरु नेतृत्वकर्ताले चाल नपाई केन्द्रको अध्यक्ष र आफू मिलेर गर्ने र सबै श्रेय आफूहरुले मात्र लिएर अरुलाई पाखा पार्ने भन्ने थियो ज्ञानबहादुरको ।
हस्तबहादुरको भाइ सहितको दलबल पार्टी प्रवेश गर्ने नै भयो भनेर भक्तले विस्वस्त पारेको थियो ज्ञानबहादुरलाई । ठूलो सभागृहमा सबै तारतम्य मिलाईसकेपछि ज्ञानबहादुरले भक्तलाई सोध्यो, “सब ठिक छ ?”
सुत्नेबेलामा ज्ञानबहादुरले आफ्नो विश्वासपात्रको फेसबुक खाताबाट लेख्न लगाइहाल्यो, “भोलि विहान एघारबजे प्रतिपक्षी समूहमाथि चट्याङ्ग बर्सिँदै ।”
राति अबेरसम्म पार्टी समकक्षीहरुले फोनको घण्टी बजिरह्यो । घण्टीको आवाज नआउँने गरी राखेकोले उसको निन्द्रामा खलल् परेन ।
“तपाईँले तत्काल नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुहोस् ।” केन्द्रीय अध्यक्ष बसेको कुर्सीबाट जुरुक्क उठ्यो । ज्ञानबहादुर ट्वाल्ल पर्‍याे । कसैले थाहा नपाई आइपुगेको केन्द्रीय अध्यक्ष कसैले थाहा नपाई केन्द्रतिर लागि हाल्यो ।
ज्ञानबहादुरको ओठमुख सुकेर फुस्रो देखियो । ऊ जुरुक्क उठेर होटलको बाहिरी कक्षमा निस्कियो अनि भक्तलाई फोन गर्‍याे ।
“रातारात सब कुरा उल्टियो । हजुरले हिजो फेसबुकमा लेख्न लगाएको कुराले बर्बाद गर्‍याे, ख्वामित् !” भक्तले डाको छाड्दै बोल्यो ।
ज्ञानबहादुरको तालु मुन्तिर अर्को ज्ञान फुर्‍याे । उसले तुरुन्त आदेश दियो , “पार्टी प्रवेश कार्यक्रम त जसरी पनि हुनपर्छ ।”
ज्ञानबहादुरले खोलाकिनार वरपर छाप्रो हालेका मानिसहरुलाई भेला गराएर पार्टी प्रवेश कार्यक्रम सफल पार्नुपर्छ भनेर भक्तलाई सुझायो ।
ज्ञानबहादुरको यो योजना पनि असफल भयो । त्रिपालले ढाकिएका तीनवटा ट्रक सहित दुईवटा गाडि लिएर जान भक्तले दशजना सुण्डमुसुण्ड खटाएछ । सुकुम्बासी वस्तिमा अकस्मात यति चहलपहल बढेको देखेर पत्रकारहरु पुगिहालेछन् । सुण्डमुसुण्डहरुले त कुलेलम ठोके तर पत्रकारहरुले सुकुम्बासीहरुबाट पार्टी प्रवेशको नालिबेली थाहा पाइहाले । तत्काल टेलिभिजनको पर्दामा बृतान्त देखा पर्‍याे ।
ज्ञानबहादुरले आँखाभरी आँशु पारेर भक्तलाई मोबाइलबाट फोन गर्‍याे । भक्तले फोन देख्यो तर उठाएन । यो घटनामा भक्त प्रत्यक्षरुपले जोडिएको देखिन्नथ्यो कुनै कोणबाट पनि । फोन आइरह्यो । उसले स्वीच अफ गर्‍याे । एकैक्षणमा भक्त पार्टीको अर्को नेतृत्वकर्ताको बैठक कक्षमा पुगिसकेको थियो ।
“ख्वामित !” भक्त जोड्संग चिच्यायो । उसले दुबै हातहरुलाई आफ्नो नाकको समानान्तर हुने गरी लमतन्न पार्‍याे । ऊ दायाँबायाँ नहेरी सोझिएको हातको दिशामा दौडदै सम्भावित ख्वामितको खुट्टा अघिल्तिर पुग्यो अनि चार पाऊ टेकेर यत्ति लामो जिब्रो निकाल्यो ।
शनिबार ६ मङ्सिर, २०७७ १०:११:०० मा प्रकाशित